प्रभु इन्स्याेरेन्सकाे आइपीओ कहिले हुन्छ बाँडफाँट ? - DURBAR TIMES
HomeEconomyप्रभु इन्स्याेरेन्सकाे आइपीओ कहिले हुन्छ बाँडफाँट ?
प्रभु इन्स्याेरेन्सकाे आइपीओ कहिले हुन्छ बाँडफाँट ?
प्रभु लाइफको आइपीओ यस हप्ताभित्र बाँडफाँट गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका अनुसार शुक्रबारसम्म आइपीओ बाँडफाँट गर्ने तयारी गरिएको छ । यद्दपी, अझै धेरै काम बाँकी रहेको र धितोपत्र बोर्डमा रिपोर्ट पनि नपठाएकाले कुन दिन बाँडफाँट गर्ने अन्तिम निर्णय भने भइनसकेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ ।
यता, प्रभुको आइपीओमा माग भन्दा बढी आवेदन परेकाले सेयर पाउन भने भाग्यमै पर पर्नुपर्नेछ । गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँट हुनेछ । यसमा कुल २ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । १० लाख ८२ हजार १४३ जनाले २ करोड ९२ लाख ८७ हजार ४३० कित्ताका लागि आवेदन दिएका हुन् । यो मागको तुलनामा ५.४२ गुणा बढी हो ।
प्रभुको आइपीओमा कुल आवेदकको संख्या १० लाख ८२ हजार १४३ जना रहेको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । यसआधारमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको ५४ लाख कित्तालाई आधार मान्दा ५ लाख ४० हजार जना आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर हात पार्ने देखिएको छ । ५ लाख ४२ हजार १४३ जना भने आइपीओ पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् ।
Previous articleयाे वर्षपनि NRIC ले लाभांश नदिने
Next articleप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ शुरु, के हुनसक्छ आज ?